Inqaba yeNdalo (indlu kaWillus), iMunnar, iVattavada - I-Airbnb
Inqaba yeNdalo (indlu kaWillus), iMunnar, iVattavada
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguJisha
Inqaba yeNdalo likhaya lakudala lamandulo lamaKristu eKerala elenziwe ngamaplanga, liphinde layilwa ngezinto zale mihla eKoviloor, eVattavada. Yinkonzo ye-eco friendly villa indawo efanelekileyo yokuhlala yabahambi eMunnar.Ibekwe kufutshane nePampadum shola National park kunye neTop station view point.Ithatha iikhilomitha ezingama-50 ukusuka kwidolophu yaseMunnar. Inqaba yeNdalo ilawulwa kwaye iphethwe yintsapho yamandulo yamaKristu yaseThodupuzha, kwisithili sase-Idukki eKerala.
I-Nature Castle iyayiqonda imfuneko yenkonzo yabatyeleli okokuqala kwaye rhoqo (URL HIDDEN) indawo yembono yeentsapho&amaqela anqwenela ukuhlala engasese.I-Campfire&nomculo kwandisa ukonwatyiswa kweendwendwe zethu.
\_u00A0Ibhedi enkulu eyi-1, 1 ibhedi elala abantu ababini, imatrasi ebekwa phantsi eyi-1
Indlu yakhiwe phakathi kwesikhululo se-eco-friendly panoramic induli iMunnar, ene-1700 yeemitha ngaphezu komphakamo wolwandle kwi-Western Ghats, enethegi yelifa lehlabathi. Ukuba unethamsanqa ngokwaneleyo, unokukwazi ukubona iintaka kunye nezilwanyana zasendle ezincinci ezinje ngebhova, imivundla, amaxhama njalo njalo, ngelixa uhlala kwiNqaba yeNdalo. Iingoma zabo zisenokukuvusa kusasa.
Umbuki zindwendwe ngu- Jisha